The unyanzvi uye fadza Nicole Richie
Kazhinji kuona pamusoro "The Simple Upenyu" kushingaira ubatanidzwe imwe TV chokwadi chokuratidza, taisagona kubatsira zvinoshamisa panguva runako uye netarenda blond nen'anga. Kutaura pamusoro mashiripiti mutambi, muenzaniso uye muimbi Nicole Richie. Zvinonzi kana munhu unyanzvi, tarenda rake kunoratidzwa muna zvose. Izvi zvinoshandawo Nicole. Kunyange zvazvo chikamu chikuru kuti musikana akakura saka Ndairidza vabereki vake vokurera. Izvi musikana kusimba pasi simba vose zvaiitika, mapikicha, mumhanzi. Zvose izvozvo zvakashanda, zvose zvakashanda zvakakwana. Pane zvose anozivikanwa okuti kuti kwete kubata hove kubva mudhamu nyore. Chero zvazvingava unofanira kushanda nesimba uye akaisa yakawanda nesimba. Asi kutanga akaisa zvose vabereki, uye ipapo munhu anotsvaka zvose pachake. Zvinganzi pamusoro Nicole.
A vachitova Biography of mutambi
Nicole akaberekwa musi waSeptember 21, 1981. Home town Berkeley iri muCalifornia. Amai vake apo aishanda mubatsiri-anozivikanwa nyeredzi mweya Layonela Richi. Njodzi musikana haana nyore. Iye akasiyiwa asina baba vavo gore rechipiri, uye ipapo iye, Lionel wake Brenda vakasarudza kutora musikana wake. Pamutemo toredzera Nicole Richie vakasarudza zvino, apo akanga 9 wemakore. Nicole aiva zvakanakisa mbudzana. Pamberi zvakanga zvakaoma kudzivisa wemashiripiti munhu. The vabereki vokurera vakaedza kuita chinhu kumusikana vakakura vakadzidza uye dzakabudirira. Yaaipinda Kutamba uye mimhanzi Studios. With zvitsva vabereki akakwanisa kudzidza kwete chete kuridza piyano, asiwo violin, chiridzwa chavo chinonzi cello, uye gitare. Nicole vobatanidzwa uye nemifananidzo Skating. Chinonyanya kukosha ndechokuti, kunyange mumhuri itsva, musikana akaramba kuramba richikurukurirana naamai pakuberekwa. vabereki New kumbobvira vaishora ichi, uye kunyange akagamuchira. Pamwe chete, vakakwanisa kukura musikana unyanzvi uye anoshamisa.
Nicole uye kutanga basa
First akazviratidza paterevhizheni Nicole Richie muna 2003. Zvakanga zvakafanana chokwadi anoratidzirei pamusoro "The Simple Life." Magazini yakabudisa zita vechikamu - Nicole Richie. Mufananidzo wakanga uri anenge ose peji. In zvekuratidza pamwechete yotunga nyeredzi muzvirongwa uye shamwari yake yepamwoyo Paris Hilton. Musikana akabvuma kare kukireshi. Kukura uye kuonekwa paTV, vakadzi vave mumwe zvinokosha uye gakava socialite. Ivo nokushingaira vanopinda evanhu zviitiko, muchirongwa wonamatidza netsvimbo, vachipika, akamisa, asi kusvikira zvino vakaramba shamwari.
Nicole uye kudya
Nicole harisi chete mutambi, iye ariwo muenzaniso. mifananidzo yake anogona kuonekwa magazini inonyanya mufashoni uye akakurumbira. kwarinovirira rakanakira basa iri, uye kwete runako chete asiwo urefu, uremu. Nicole Richie anogara yakawanda basa pachavo. Her yakanaka mufananidzo - mugumisiro vatambi uye zvokudya zvakasiyana-siyana. Kamwe Nicole ainakidzwa nevamwe uremu. Akanga zvikuru pasi bvumidzwa, asi hapana aigona kumisa Nicole Richie. Neanorexia haasi anoenda kure nokukurumidza. The muenzaniso rave yawapiwa, uye achangobva zvakazara rehabilitated. Zvino anotarisa nani zvikuru uye akapora zvishoma. Vazhinji zvokudya iye haadi mapfumo, asi chete akagadzirirwa pacharo zvokudya zvitsva.
The mafirimu yokutanga
The firimu rokutanga umo Nicole Richie akaratidza kuva mutambi chaiye, aiva "American vana." Yakanga 2005. Zvadaro iye starred mune mamwe mafirimu, asi ivo dzaiwanzova duku Cameo. mutambo wake vanotarisa zvinofadza uye graced mafirimu akadai "Chuck," "chiito, mwana," "American Dreams," uye vamwe.
Chimwe basa mutambi
Mukuwedzera kushanda paterevhizheni, Nicole uye kuita mabasa kunyora. Iye akanyora itsva pamusoro chokwadi pamusoro mangoda. Zvinonzi inobva nhoroondo musikana Chloe Parker, ndiyo nyaya pacharo. Nicole akarondedzera kwazvo zvose hwake. Handikanganwi pamusoro wake muduku, pamusoro hwake. Chokwadi, zvakawanda rave embellished uye akawedzeredzwa, asi pasina izvozvo? Zvinonzi mubhuku, munyori Rinotarisira kuratidza fungidziro dzavo dzose. Nicole Richie harisi chete muimbi wakanaka, asi mumwe muimbi. Iye akaita pamwe yakakurumbira mumhanzi bhendi "Darling" uye auditioned kubatanidzwa zvokuridza. basa rayo vateereri vaikoshesa basa Roxie mu akakurumbira marimba "Chicago." zvino Nicole ari kushanda paari debut album. nhau iyi yakabudiswa venhau, asi chete kusvikira musikana pachake haritauri chinhu. Vanoiona chete vanofanira kumirira inotevera kushamisika. Yaiva Nicole: kupota, makata, zvinonyadzisa, zvirwere, hachifadzi mamiriro ezvinhu. Iva zvizere maonero enyika hakusi nyore. Uye mushure mutambi zvarwo kuti muimbi bhendi "Charlotte Good" kuroorana, upenyu hwake akava zvishoma hwakanyarara, uye akaenda njanji.
Nhasi, ichi vaviri ndeimwe vanofara uye ushamwari kuHollywood. Vakaroorana kushanda uye kusimudza dzavo nevana akakurumbira: mwanasikana Kate uye muduku mwanakomana James. Uyezve, vakasarudza chete kuvaka nhandare yakakura muLos Angeles, asiwo kuzarura hwaro hwavo norupo.
Bruklin paMakazi: mumwe Biography uye Filmography rejaya mutambi
Firimu "John unopfungaira": wongororo vateereri uye nevatsoropodzi
Kulidzh Dzhennifer - risingaenzaniswi comedienne, muimbi mabasa ari Genre kuti anomira-up
All mumutambo "The Lovely Mapfupa ': vatambi, vatambi, nyaya kwezvisikwa
Popular cartoons nezvengirozi
Actor Pyotr Romanov: Biography, upenyu hwomunhu. mabasa okusika
Details pamusoro zviri "Vaunodzidza navo" yebhuruu sikweya
Action - ichi chinhu anocheka kuti kukurumidza
Sei ari wokuwachisa kuruka kutenderera haashandi?
Resort Abkhazia. Uye plesieroorde kurapwa: yacho rating, tsananguro uye wongororo
Zvakavanzika Folk Medicine
Chakarebesa nzara munyika - runako kana kuipa?
Chemicals kuti svikiro bvudzi: sei kuva rakamonana runako?
Zvikwepa Water: siyana uye kushandisa
The diode rambi - ramangwana okuvimba?
Kefir uye Buckwheat kudya
Whereush Pushkin, munyori mukuru weRussia, akavigwa kupi?
Kushandura nguva bhandi iri motokari "vakanciq Priora"